Ntuziaka 5 na otu esi akwụ ụgwọ nyocha ndị ahịa na - elekọta mmadụ | Martech Zone
Ọma ahịa bụ a siri ike ahụmahụ, ọ bụghị naanị n'ihi na big ụdị kamakwa maka nkezi. Ma ị nwere nnukwu azụmaahịa, obere ụlọ ahịa dị na mpaghara, ma ọ bụ ikpo okwu ntanetị, ohere ị nwere ịrịgo nrịgo dị nrịgo pere mpe belụsọ ma ị na-elekọta ndị ahịa gị nke ọma.
Mgbe ị na-echegbu onwe gị na atụmanya gị 'na obi ụtọ ndị ahịa, ha ga-aza ngwa ngwa. Ha ga-enye gị nnukwu elele nke jikọtara ntụkwasị obi, nyocha ndị ahịa, yana ahịa n'ikpeazụ.
Na post nke taa, a na m ekenye 5 ntụzị banyere otu esi eme ka nyocha ndị ahịa soshal midia iji melite arụmọrụ nke azụmaahịa gị.
1. Ghọta Ihe Ndị Ahịa Gị Chọrọ
Enweghị ndị akaebe nke ndị ahịa, nzaghachi nzaghachi ga-esi ike nnweta. Ọnụ ọgụgụ ị chịkọtara site na ngwanrọ nchịkọta na ngwọta dị oke aka ma zie ezi, mana enweghị ike iji ha tụnyere nzaghachi nzaghachi ndị na-akwado gị na ndị ahịa gị nwere ike ịnye.
Fick Turban, Onye isi ala na ebe a.com, yiri ka ọ masịrị inye anyị nkọwa nghọta:
Ọganihu azụmaahịa dabere na njikarịcha. N'otu oge, njikarịcha dabere na nzaghachi. Ozugbo ị nwetara nke a, ị ga-ahụ azụmaahịa gị n'ụzọ dị iche na ị gaghị enwe ike ịnweta echiche kachasị mma.
Kedu ihe ọ pụtara ịkwalite? N'okwu dị mfe, njikarịcha pụtara:
Iji melite mmekọrịta n'etiti azụmahịa na onye ahịa
Iji melite mkpa na mma nke ngwaahịa na ọrụ gị
Developzụlite gị ihe bara uru bara uru
Iguzo iche n’etiti igwe mmadu na gafee ndị asọmpi gị
Iji gbanwee mfe Fans n'ime ndị nnọchiteanya na-eguzosi ike n'ihe
Akaebe nke ndị ahịa bụ ọnụọgụ ọnụọgụgụ nke na-eme ka eziokwu, okwu na-enweghị isi gbasara akara gị. Ka ị na - enwetakwu nzaghachi (nke ziri ezi ma ọ bụ na-adịghị mma) ị ga - eme ka ị ghọta ndị na - ege gị ntị. Mgbe obere oge gachara, ị ga - ahụ etu omume ndị ahịa gị si dị, yabụ ọ bụ mgbe ahụ ka ị ga - ama ma usoro na atumatu gị kachasị ọhụrụ ga - emezi ma ọ bụ belata arụmọrụ azụmahịa gị.
2. Chọpụta ebe ndị asọmpi gị na-ere
Effectivezọ ọzọ dị mma iji bulie nsonaazụ azụmaahịa gị bụ ị paya ntị na aha ndị asọmpi gị na akaebe ndị ahịa.
Nwere ike soro ala ọ bụla otu okwu ma ọ bụ ika aha iji mpi analysis ngwaọrụ. Chọta ngwa ọrụ dabara na mkpa gị ma jiri ya mara ma "jide" ndị ahịa na-enweghị obi ụtọ nke mere mgbalị ịkatọ ndị asọmpi gị.
Nye ihe ngwọta ka mma nye nsogbu ha, ha ga-agbanwe ozugbo. Nwere ike ịkpọtụrụ ha site na iji ozi nzuzo, ma ọ bụ ka mma, jiri akaụntụ "adịgboroja" zaghachi echiche ndị ndị na-enweghị afọ ojuju ị nyochara. Duru ha ozugbo na akara gị site na ịhapụ nyocha "enweghị echiche" nke ihe ngwọta nke akara gị nwere ike iweta.
3. Ngosipụta Akaebe Ndị Dị Mma na Weebụsaịtị gị
Kedu ụzọ kacha mma iji mee ka akaebe nke mgbasa ozi mmekọrịta karịa igosi ha na weebụsaịtị gị? See hụrụ, ọ bụghị ndị ahịa niile nwere ike ịgafe na ibe mgbasa ozi gị, yabụ ọtụtụ n'ime ha agaghị ahụ echiche nke ndị ahịa ndị ọzọ.
Dabere na otu ị chọrọ iji gosipụta ha, ị nwere ike iji a free nseta ihuenyo ngwa iji jide nleba anya ma ọ bụ ị nwere ike ide ha dị ka ederede ma chọta ha ebe dị mma na saịtị gị. Kedu ụzọ ọ bụla, buru n'uche na 95% nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị nwere ike ịzụta ihe mgbe ị gụsịrị nyocha a tụkwasịrị obi.
4. Mee ka mmekọrịta gị na ndị ahịa gị kawanye mma
Nke a bụ iwu a na-edeghị ederede ị kwesịrị iburu n'uche: zaghachi mgbe niile ndị ahịa gị. Ezigbo ma ọ bụ ihe ọjọọ, o nweghị ihe o mere. Site na ileghara nyocha na-adịghị amasị gị anya, ị na-egosi na enweghị ike ịtụkwasị gị obi. Site na ileghara ndị dị mma anya, ị gaghị echefu ohere ịmepe ntụkwasị obi ka mma na ndị ahịa hapụrụ nyocha ahụ, ị ​​ga - egosi na akara gị enweghị ndị ahịa ya n'uche.
Site na ịza oge niile na nyocha gị na akara aka gị, ị ga-enweta nkwanye ugwu na iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa ndị na-agafe agafe, na-achọ nyocha ndị na-enweghị isi.
5. Gbanwee Ndị Na-eso Iguzosi Ike n'Ihe na Nnọchite Ndị Nnọchiteanya
Replyingza ihe akaebe bụ nzọụkwụ mbụ. Inbanye na nke abụọ. Oge ọ bụla ị natara ihe akaebe dị mma na mgbasa ozi ọha na eze, nye azịza bara uru (nke ndị mmadụ nwere ike ịhụ) ma kwadebe ụzọ ziri ezi maka onye mere mgbalị ịkekọrịta echiche ha.
Nwere ike ịmalite na ihe dịka “Hey, anyị nwere ekele maka oge ị were iji nyochaa ngwaahịa / ọrụ anyị, ọ ga-amasị anyị ịmatakwu gị nke ọma…” Ikwesighi igbali ike - o yikarịrị, onye ahịa ọ bụla Ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ gị, ị ga-ahụ nke ọma.
Kedu ihe ị ga-arịọ? Ọfọn, maka ndị na-ebido ebido, ị nwere ike ịgba onye na-enyocha gị ume ka ọ ghaa nyocha gbasara ahụmịhe ha nwere na saịtị gị, ngwaahịa gị, nkwado ndị ahịa gị, wdg.
Ma ọ bụ, ọbụna nke ka mma, ịnwere ike ịnye ha ohere ịghọ otu n'ime gị ndị nnọchiteanya. Nke a pụtara na ha ga-enweta ngwaahịa n'efu ma ọ bụ belata, ụgwọ ego, ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ nke ọma, ha niile gbanwere nkwado ha n'ọdịnihu. Ọrụ ndị nnọchi anya ọrụ ahụ bụ iji kwalite aha azụmaahịa ebe ọ bụla ha na-aga, site na iji hashtags, ịkekọrịta ọdịnaya, masịrị post na site n'ịgba ndị enyi na ndị a ma ama ume ịlele ngwaahịa ngwaahịa a.
N’etinyeghi ndi otu ndi otu aka ndi choro inyocha onodu gi, ngwa ahia gi na oru gi, igosi ikike n’ime niche ahu gha aburiri oru siri ike. Netwọk mgbasa ozi mmekọrịta bụ ọlaedo nye ndị ma etu esi eji ha nke ọma. Na-emeso Fans gị nke ọma site na ịnye ha mma, uru, na nlekọta. Ka oge na-aga, mmekọrịta gị na ndị ahịa gị nke mepụtara nke ọma ga-emepụta mmetụta dị ịtụnanya nke ga-agbanwe ihu ahịa gị.
Tags: ndị nnọchiteanyampinyocha ndị ahịandị akaebe ndị ahịaFick eke n'isiNyochaelekọta mmadụ mgbasa ozi reviews
Olivia bụ onye blogger nwere mmasị na-ede banyere isiokwu nke ahịa dijitalụ, ọrụ, na mmepe onwe onye. Ọ na-agba mbọ mgbe niile ịmụ ihe ọhụụ ma keta ahụmịhe a na weebụsaịtị dị iche iche.